တမူးမြို့နယ်တွင် (၃)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး ငယ်လေး အား အသက်(၁၃) ခန့် အရွယ်လူငယ်မှ မဖွယ်မရာ ပြုကျင့် မှုဖြစ်ပွား – MM Flash News
တမူးမြို့နယ်တွင် (၃)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး ငယ်လေး အား အသက်(၁၃) ခန့် အရွယ်လူငယ်မှ မဖွယ်မရာ ပြုကျင့် မှုဖြစ်ပွား
၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၀၃ ရက်နေ့တွင် တမူးမြို့နယ် ကျွန်းတောရေ ရှင်ကျေးရွာ၌ (၃)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်လေး အား အသက်(၁၃) ခန့် အရွယ်လူငယ်မှ မဖွယ်မရာ ပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ တမူးမြို့နယ်၊ ခမ်းပါတ်နယ်မြေရဲ စခန်းတောင်ဘက် (၁၂)မိုင်ခန့်အကွာ ကျွန်းတောရေရှင်ေ ကျးရွာ တွင် ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၀၃ ရက်နေ့ နံနက်(၅)နာရီခန့်အချိန်၌ တရားလို သည်နေအိမ်မှ စပါးရိတ်ထွက် သွားချိန် တွင်နေအိမ်တွင် သားအကြီးဖြစ်သူမောင်သားကို(၉)နှစ်၊မောင်ရဲရင့်ကို(၆)နှစ်နှင့်သမီးအငယ်ဆုံးဖြစ်သူ မ…… .(၃)နှစ် (၃)လတို့သာကျန်ရှိခဲ့ပြီး ညနေ(၆)နာရီခန့်အချိန်တွင် နေအိမ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိချိန်တွင် တရားလို၏သမီးဖြစ်သူ မ……. မှ “မေမေသမီးကို ကိုမင်းချစ်ဦးမှ ဖုတ်ဖုတ်ကိုလုပ်တယ်
“ဟုခြေဟန်လက်ဟန်ရောပါပြီး ပြောပြသဖြင့် တရားလိုမှ သမီး၏လိမ္မော်ရောင်ဘောင်း ဘီအားချွတ်ကြည့်ရာ မိန်းမ အင်္ဂါမှာ နီရဲနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး သားအလတ်ဖြစ်သူ ရဲရင့်ကိုအား ဟုတ်သလားဟုမေးရာ ဟုတ်မှန်ကြောင်း၊ နေ့ လည်(၁၁)နာရီကျော်ခန့် သားကြီးဖြစ် သူမောင်သားကို ရေသွားခပ်နေစဉ် သားအလတ်နှင့် သမီးအား မင်းချစ်ဦးမှ ၎င်း၏နေအိမ်ပေါ်သို့ခေါ်ကာ သမီးဖြစ်သူအား နေအိမ်ရှေ့ခန်းတွင်အိပ်ခိုင်းပြီး မင်းချစ်ဦးမှ ယောကျာ်းတန်ဆာဖြင့် ထိုးသွင်းသည်ကို မြင်တွေ့ရကြောင်း၊ သားအကြီးဖြစ်သူမောင်သားကိုအား ထပ်မံမေးရာ ဟုတ်မှန်ကြောင်း
မင်းချစ်ဦးမှ ဂျင်ပေးမည်ဟုပြော၍ ရေခပ်ခိုင်းသဖြင့် ရေသွားခပ်ပြီးပြန်လာစဉ် မင်းချစ်ဦးအိမ်၌ သမီးဖြစ်သူငိုနေသဖြင့် သားကြီးဖြစ်သူမှ သမီးအားမေးရာ သားလတ်နှင့် သမီးအား မင်းချစ်ဦးမှ ၎င်း၏နေအိမ်ပေါ်သို့ခေါ်ကာ သမီးဖြစ်သူ အား နေအိမ်ရှေ့ခန်းတွင် အိပ်ခိုင်းပြီး မင်းချစ်ဦးမှ ယောကျာ်းတန်ဆာဖြင့် ထိုးသွင်းသဖြင့် ငိုနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြော ဆိုခဲ့သဖြင့် သမီးဖြစ်သူအား သားမယားဖြင့်ပြုကျင့်သူ မင်းချစ်ဦး (၁၃)နှစ်ခန့်(ဘ)ဦးဇော်ဝင်း၊(၇)တန်း၊ဗမာ၊ ကျွန်းတောရေရှင်ရွာ ၊ခမ်းပါတ်မြို့နေသူအား အရေးယူပေးပါရန် တိုင်တန်းခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ အမှုမှ တရားခံအား ခမ်းပါတ်နယ်မြေစခန်း တွင် (ပ)၃၁/၂၀၁၉၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ(၃၇၆) ဖြင့် အမှုဖွင့်ဆောင် ရွက် ထားကြောင်းသိရသည်။
Myanmar_Online_News #တမူးမြို့နယ် #ခမ်းပါတ်နယ်မြေရဲစခန်း #မဖွယ်မရာပြုကျင့်မှု
တမူးမွို့နယျ တှငျ (၃)နှဈအရှယျ မိနျးကလေးငယျ လေးအား အသကျ(၁၃) ခနျ့ အရှယျလူငယျမှ မဖှယျ မရာ ပွုကငျြ့မှုဖွဈပှား
၂၀၁၉ ဒီဇငျဘာ ၀၃ ရကျနတှေ့ငျ တမူးမွို့နယျ ကြှနျးတောရေ ရှငျကြေးရှာ၌ (၃)နှဈအရှယျ မိနျးကလေးငယျလေး အား အသကျ(၁၃) ခနျ့ အရှယျလူငယျမှ မဖှယျမရာ ပွုကငျြ့မှုဖွဈပှား ခဲ့ကွောငျး သိရှိရသညျ။
ဖွဈစဉျမှာ စဈကိုငျးတိုငျး၊ တမူးမွို့နယျ၊ ခမျးပါတျနယျမွရေဲ စခနျးတောငျဘကျ (၁၂)မိုငျခနျ့အကှာ ကြှနျးတောရေ ရှငျေ ကြးရှာ တှငျ ၂၀၁၉ ဒီဇငျဘာ ၀၃ ရကျနေ့ နံနကျ(၅)နာရီခနျ့အခြိနျ၌ တရားလို သညျနအေိမျမှ စပါးရိတျ ထှကျ သှားခြိနျ တှငျနအေိမျတှငျ သားအကွီးဖွဈသူမောငျသားကို(၉)နှဈ ၊မောငျရဲရငျ့ကို(၆)နှဈနှငျ့ သမီးအငယျ ဆုံးဖွဈသူ မ…… .(၃)နှဈ (၃)လတို့သာကနျြရှိခဲ့ပွီး ညနေ(၆)နာရီခနျ့အခြိနျတှငျ နအေိမျသို့ပွနျလညျ ရောကျရှိ ခြိနျ တှငျ တရားလို၏သမီးဖွဈသူ မ……. မှ “မမေသေမီးကို ကိုမငျးခဈြဦးမှ ဖုတျဖုတျကိုလုပျတယျ
“ဟုခွဟေနျလကျဟနျရောပါပွီး ပွောပွသဖွငျ့ တရားလိုမှ သမီး၏လိမ်မျောရောငျဘောငျး ဘီအားခြှတျကွညျ့ရာ မိနျးမ အင်ျဂါမှာ နီရဲနသေညျကိုတှရှေိ့ရပွီး သားအလတျဖွဈသူ ရဲရငျ့ကိုအား ဟုတျသလားဟုမေးရာ ဟုတျမှနျကွောငျး၊ နေ့ လညျ(၁၁)နာရီကြျောခနျ့ သားကွီးဖွဈ သူမောငျသားကို ရသှေားခပျနစေဉျ သားအလတျနှငျ့ သမီးအား မငျးခဈြဦးမှ ၎င်းငျး၏နအေိမျပျေါသို့ချေါကာ သမီးဖွဈသူအား နအေိမျရှခေ့နျးတှငျအိပျခိုငျးပွီး မငျးခဈြဦးမှ ယောကျြားတနျဆာဖွငျ့ ထိုးသှငျးသညျကို မွငျတှရေ့ကွောငျး၊ သားအကွီးဖွဈသူမောငျသားကိုအား ထပျမံမေးရာ ဟုတျမှနျကွောငျး
မငျးခဈြဦးမှ ဂငျြပေးမညျဟုပွော၍ ရခေပျခိုငျးသဖွငျ့ ရသှေားခပျပွီးပွနျလာစဉျ မငျးခဈြဦးအိမျ၌ သမီးဖွဈသူငိုနေ သဖွငျ့ သားကွီးဖွဈသူမှ သမီးအားမေးရာ သားလတျနှငျ့ သမီးအား မငျးခဈြဦးမှ ၎င်းငျး၏နအေိမျပျေါသို့ချေါကာ သမီးဖွဈသူ အား နအေိမျရှခေ့နျးတှငျ အိပျခိုငျးပွီး မငျးခဈြဦးမှ ယောကျြားတနျဆာဖွငျ့ ထိုးသှငျးသဖွငျ့ ငိုနေ ခွငျးဖွဈကွောငျး ပွော ဆိုခဲ့သဖွငျ့ သမီးဖွဈသူအား သားမယားဖွငျ့ပွုကငျြ့သူ မငျးခဈြဦး (၁၃)နှဈခနျ့(ဘ)ဦးဇျောဝငျး ၊(၇)တနျး၊ဗမာ၊ ကြှနျးတောရရှေငျရှာ ၊ခမျးပါတျမွို့နသေူအား အရေးယူပေးပါရနျ တိုငျတနျးခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။
အဆိုပါ အမှုမှ တရားခံအား ခမျးပါတျနယျမွစေခနျး တှငျ (ပ)၃၁/၂၀၁၉၊ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ(၃၇၆) ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ဆောငျ ရှကျ ထားကွောငျးသိရသညျ။
Myanmar_Online_News #တမူးမွို့နယျ #ခမျးပါတျနယျမွရေဲစခနျး #မဖှယျမရာပွုကငျြ့မှု
Previous Article ကွမ်းခြံအတွင်း၌ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် ကလေးငယ် တစ်ဦး ဦးခေါင်းနောက်စေ့ ကြေမွဒဏ်ရာ များဖြင့် သေ ဆုံးလျက် တွေ့ရှိ
Next Article တချိန်က ငွေစက္ကူပေါ်မှာပါခဲ့တဲ့ မောင်ကောင်း ဆိုသူ တစ်ယောက် အကြောင်း